The U.S.-based Famine Early Warning System Network has warned that food stocks will be depleted this month in western Zimbabwe where some 2 million people face hunger - this amid political agitation over a fresh wave of farm invasions and land grabs.
Earlier this month just days before a SADC summit, Justice Minister Patrick Chinamasa said Zimbabwe would no longer recognize the authority of the SADC tribunal.
SADC Executive Secretary Tomaz Salamao told VOA that Harare’s move to repudiate the tribunal has been referred to the ministers of justice of the regional bloc's member nations who have been asked to provide legal guidance to SADC heads of state.
Commenting on the general state of affairs, ZANU-PF Secretary of Administration Didymus Mutasa, a minister of state in President Mugabe’s office, told reporter Blessing Zulu of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that there is no going back on farm seizures.
Deputy Spokesperson Thabitha Khumalo of the Tsvangirai MDC formation called Mutasa’s remarks unfortunate, saying farm disruptions are undermining economic recovery.
Johannesburg-based political analyst Zenzo Nkomo told reporter Ntungamili Nkomo that the ZANU-PF pursuit of land reform will continue to deter foreign investment in Zimbabwe.